Ungalivelisa njani ixabiso kwiNtengiso yeDijithali | Martech Zone
Kule veki nje ndaye ndadliwanondlebe malunga nomsebenzi wokwenziwa komsebenzi esiwenzayo kwaye enye yeengxaki esizifumana ziphambili kuninzi lwethemba lethu kunye neenzame zokuthengisa zabathengi kukuba bafuna ukuba bangazakhi iindawo abanethemba kuzo kunye nabaxumi- bayayakha ngokwabo. Sukundibetha ngokungalunganga, ewe inkampani yakho ifuna ukuyithanda indawo yakho kwaye iyisebenzise njengesixhobo… kodwa ulawulo, iqonga, kunye nomxholo kufuneka uyilelwe kwaye ulungiselelwe ukufunyanwa kwabathengi kunye nokugcinwa. Le infographic ivela Umnqweno woNcedo -Inkampani ebonelela ngokuguqula ukusebenza, uvavanyo lwe-A / B kunye kubahlalutyi iinkonzo zonxibelelwano.
Lonke ishishini elikwi-intanethi lityala imali ngandlela thile kwintengiso yedijithali kwaye ukujonga kwiDatha yeGoogle Trends kubonisa ukuba abathengisi abaninzi kunye nemibutho bazama ukufumana ezona ndlela zibalaseleyo zokufumana imbuyekezo kolo tyalo mali. Kule infographic FunnelEnvy idibanise imisebenzi ethile efanelekileyo, amanani kunye neendlela malunga Ukufunyanwa kwabaThengi kwaye UkuSebenza kwabaThengi, iiseti ezimbini zemisebenzi abathengisi ekufuneka bayilinganise ukuze bavelise ixabiso.
tags: vavanyoijelo lokufumanaukulahlwa kwenqweloukuguqulwa kokusebenzaiindlela zokuguqulaukufunyanwa kwabathengiUhlalutyo lohambo lwabathengiUkulungiswa kwabathengiukwaneliseka kwabathengiPhuhlisoukuthengiswa kwedathaurhwebo mobileukuvavanywa kwezinto ezininziinqaku lokukhuthaza umnathaiintengiso ezikwi-Intanethiukukhangela okuhlawulelweyoZixhoboisahluloSEOSocial Media Marketingukufanelekaukusebenziseka kovavanyoUyilo lwecentric lomsebenzisi
Mar 25, 2014 ngo 10:25 PM
Mar 26, 2014 ngo-1: 59 AM